Local News Archives - Khitamyin
May 10, 2022 Ko Khit 0
ဘုန်းကြီးတွေ သီလရှင်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို ဓမ္မကို တတ်ကျွမ်းနားလည်အောင် သင်ကြားပြသညွှန်ကြားရတဲ့ ဆရာနေရာမှာ ရှိကြပါတယ်။ ရတနာသုံးပါးအနေနဲ့ရော အနန္တောအနန္တငါးပါး ဂိုဏ်းဝင်အဖြစ်နဲ့ပါ လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အရိုအသေပြုရတဲ့ ဆရာအဆင့်မှာ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ယနေ့ခေတ်မှာ ဘုန်းကြီးအများစုဟာ ပြည်သူအများရဲ့ဘက် မျက်နှာမမူဘဲ စစ်ကျွန်ဘဝကို မက်မောတပ်မက်ကြသလဲ မကြာခဏ စဉ်းစားမိပါတယ်။ […]
May 9, 2022 Ko Khit 0
စစ်တပ်ရဲ့ကျေးဇူး မူးလို့တောင် ရှူစရာမရှိဘူး မင်းတို့မှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ပါတီကြီးတွေ ရှိတာတောင် ရွေးကောက်ပွဲ မနိုင်လို့ အာဏာတက်သိမ်းတယ် ။ မင်းတို့မှာ အမာခံ လော်ဘီတွေ ရှိတာတောင် လိုင်းပေါ်က အမှန်တရားတွေကို မနိုင်လို့ အင်တာနက်ပိတ်တယ် ။ မင်းတို့မှာ ခိုင်မာတဲ့ တရားစီရင်ရေးတွေ ရှိတာတောင် တရားမျှတမှု […]
May 8, 2022 Ko Khit 0
နေပြည်တော်တွင် ယခုလအတွင်း အောင်မြင်သည့်လှုပ်ရှားမှုများ မြင်တွေ့ရတော့မည်ဟု ဖီးနစ်မြို့ပြပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ တာဝန်ခံ ဗိုလ်တေဇကပြောသည်။ ဖီးနစ်မြို့ပြပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ သည် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ နောက်ဆုံးခြေကုပ်နေရာဖြစ်သည့် နေပြည်တော် အခြေစိုက်မြို့ပြပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဗိုလ်တေဇက ပြောသည်။ လတ်တလောလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်။ချပြဖို့အဆင်မပြေသေးလို့ အသိမခံချင်သေးတာပါဟု ဖီးနစ်မြို့ပြပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ တာဝန်ခံ ဗိုလ်တေဇက ရှင်းပြသည်။ […]
တက်ပုကြင်စိုး၏ အရူးမီးဝိုင်း ဇာတ်သိမ်းပိုင်း ရောက်တော့မည်
May 7, 2022 Ko Khit 0
ဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်တော့မည်၊ ဇာတ်လမ်းရဲ့အထွတ်အထိပ် ဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံးရောက်လာပြီမို့..ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာခဲ့ပြီ။ အာဆီယံကNUG. ပြည်သူ့အစိုးရကို ထိတွေဆက်ဆံမည်ဟု.ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လျှင်..ပွဲက ပြီးတော့မည်။ မလေးရှားကတော့”သူရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို.စစ်ကောင်စီ ဝက်ကြီးက အမိန့်ပေး ပုတ်ခတ် စော်ကားလိုက်သဖြင့် မခံချိမခံသာဖြစ်ကာ..သူအဆိုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်တော့မည်ထင်သည်။ ကာပုရဲ့ဟန်​ပြငြိမ်းချမ်းရေး ဖိတ်ခေါ်ချက်ကလည်း အင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ငြင်းပယ်ခြင်းခံလိုက်ရသည်။.. ကာပုလိုချင်တာက KIA. (KIO)KNU. KNPP.နဲ့ .CNF. စသည် အင်အားကြီးလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များကိုဖြစ်သည်။ တကယ်ရောက်လာမှက..သူခေါ်တိုင်းလာ.သူခိုင်းရာလုပ်ပြီး..အခွင့်အရေးချောင်းနေကြတဲ့.ကိုယ်လူမျိုးအချင်းချင်းတောင်ထောက်ခံမှုမရသည့်..မူးယစ်ကုန်သည်များသာဖြစ်သည်။ (ဒီနေရာမှာ […]
January 8, 2022 Ko Khit 0
ပြည်သူများ လျှပ်စစ်ကို လျှော့သုံးကြရန် စစ်ကောင်စီလျှပ်စစ်ဌာန ပန်ကြား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မှုလျော့နည်းကျဆင်းလာတဲ့အတွက် လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲတာများတဲ့ အချိန်တွေမှာ မီးပြတ်တောက်မှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လျှပ်စစ်ကို လျှော့သုံးဖို့ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ လျှပ်စစ်နဲ့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာပါတယ်။ ပုံမှန်အချိန်မှာ အမြင့်ဆုံး ၄၂၀၀ မဂ္ဂါဝပ်လောက် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ ပြည်ပကနေ မှာယူတင်သွင်းရတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ဈေးနှုန်း […]
ယခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလှည့်အပြောင်းတွေ ဖြစ်လာမယ်
လက်ရှိ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ဟာဝိုင်ယီအခြေစိုက် လုံခြုံရေးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အာရှ-ပစိဖိတ် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဌာန ပါမောက္ခလည်းဖြစ် အမေရိကန်နိုင်ငံစစ်တပ်ရဲ့ အငြိမ်းစား ဒုဗိုလ်မှူးကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်က မှတ်ချက်ပြုပြောကြား ထားပါတယ်။ “ ဆိုတော့ ၂၀၂၂ မကြာခင်မှာပဲ turning point ရောက်သွားမယ်။ ဘယ်လ ဘယ်မှာဆိုတာတော့ […]
အိန္ဒိယမှ နှလုံးခွဲစိတ် အထူးကုများကိုဖိတ်၍ မြေးဖြစ်သူကို ကုသခိုင်းခဲ့
January 7, 2022 Ko Khit 0
မြန်မာပြည်သူများ၏ သဘောထားကို လစ်လျူ ရှုကာ စီစဉ်လာသော ဟွန်ဆန်၏ နှစ်ရက်ကြာ ခရီးစဉ်က ယနေ့ စတင်လာဖို့ ရှိနေသည်။ ယင်းနှင့် အတူ စစ်ကောင်စီ၏ ဝါဒ ဖြန့်ချီရေး ယန္တယားကြီး မှာ တဂျုံးဂျုံး ဖြင့် မောင်း နှင်နိုင်ရန် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားပြီလည်း ဖြစ်သည်။ […]
လွတ်မြောက်နယ်မြေအတွင်း “နွေဦးကျန်းမာ“ ပြည်သူ့ဆေးရုံ စတင်ဖွင့်လှစ်
January 5, 2022 Ko Khit 0
လွတ်မြောက်နယ်မြေအတွင်း “နွေဦးကျန်းမာ“ ပြည်သူ့ဆေးရုံ စတင်ဖွင့်လှစ် တိုင်းရင်းသားဒေသ လွတ်မြောက်နယ်မြေအတွင်း “နွေဦးကျန်းမာ“အမည်ဖြင့် ပြည်သူ့ဆေးရုံအား ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ​ဆေးတက္ကသိုလ်(၂)(Yangon Student Committe)က ထုတ်ပြန်သည်။ အဆိုပါ ဆေးရုံကို ဆေးတက္ကသိုလ်(၂) ရန်ကုန် ကျောင်းသားကော်မတီမှဦးစီး၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆရာ၊ဆရာမများဖြင့် ပြည်သူများအား […]
AYA ဘဏ်ရဲ့ ငွေသားဖြင့် အတိုးကြိုထုတ်ပေးမယ့် စာရင်းသေအပ်ငွေ အစီအစဉ်သစ်
January 4, 2022 Ko Khit 0
AYA ဘဏ်ရဲ့ ငွေသားဖြင့် အတိုးကြိုထုတ်ပေးမယ့် စာရင်းသေအပ်ငွေအစီအစဉ်သစ် ဧရာဝတီဘဏ်က AYA New Year Fixed Deposit စာရင်းသေအပ်ငွေတွေကို အတိုးကြိုပေးတဲ့အနေနဲ့စာရင်းသေအပ်ငွေအတိုးကို ငွေသားဖြင့်လက်ငင်းထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း ကြေညာထားပါတယ်။ အဆိုပါ စာရင်းသေအပ်ငွေအား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်ကာအတိုးကိုလက်ငင်းရယူနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(မြန်မာနှစ်ကူးချိန်) ရက်ပေါင်း ၁၂၀ […]
တရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ သုတေသနဌာနတစ်ခုလုံးကို စစ်ကောင်စီတရားစွဲ
စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထံ နိုင်ငံတကာတရားရုံးများထံမှ ဖမ်းဝရမ်း(သို့မဟုတ်) ဆင့်ခေါ်စာပို့လာပါကလက်မခံကြရန် ဌာနတွင်း ညွှန်ကြားစာ ‌ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခဲ့မှုကြောင့်ဟုဆိုကာ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ သုတေသနဌာနတစ်ခုလုံးကို တရားစွဲဆိုထားသည်ဟု CDM တရားရေးဝန်ထမ်းအချို့က ပြောဆိုကြောင်း People’s Spring သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ သုတေသနဌာနမှ ဝန်ထမ်းများကို စစ်ကောင်စီ၏ ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနက တရားစွဲဆိုထားခြင်းဟု CDM တရားသူကြီးတစ်ဦးကပြောသည်။ […]